Stupid Zombies21.5.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.2 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Stupid Zombies 2
Stupid Zombies2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, brainless သတ္တဝါနှင့်ဤအသစ်ယို-သိပ်သည်းလွှတ်ပေးရန်အတွက်အမည်ရတဲ့ Undead ပြန်လာ, လက်နက်တွေ, ပဟေဠိတစ်ခု slick, ကစားသမား-friendly package ကိုဖွင့်ထုပ် Moody ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံး။ သူတို့ကသင်ပြီးသားအသေကောင်သည်အဘယ်သို့မသတ်နိုင်ဟုပြောပေမယ့်သူတို့ရဲ့အထွေထွေဦးတည်ပစ်ခတ်သဖြင့်တစ်ဦးရေပက်အောင်နာကျင်လို့မရပါဘူး။
ဒါဟာကိုယ့်သင်ဖုတ်ကောင် vs ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကျည်ဆံတွေထဲက run ရှေ့တော်၌ထိုအဆုံးမဲ့အမျက်ထွက်အလုံးအရင်းရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ။
ယခုကပင်ပိုကောင်း Funtastic ဂိမ်း,!
အခုဆိုရင် 600 အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ။
Stupid Zombies2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Stupid Zombies2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Stupid Zombies2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Stupid Zombies2အား အခ်က္ျပပါ
Stupid Zombies2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Stupid Zombies2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.5.2
ထုတ်လုပ်သူ YesGnome, LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.gameresort.com/privacy
Release date: 2019-07-28 18:11:29
လက်မှတ် SHA1: 7A:67:F4:C5:CE:96:95:CF:00:FA:06:A8:CA:94:53:5C:C0:B9:F7:5C
အဖွဲ့အစည်း (O): GameResort
Stupid Zombies2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ